Wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dilkii AUN Sheekh C/qaadir Gacamey+SAWIRO – SBC
Wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dilkii AUN Sheekh C/qaadir Gacamey+SAWIRO
Warbaahinta SBC oo si joogto ah idinkugu soo gudbinaysay wararka la xiriira dilkii maanta magaalada Garoowe loogu geystey ALLAHA u naxariistee Sheekh C/qaadir Nuur Faarax (Gacamey) oo ka mid ahaa culimada waa weyn ee Soomaaliyeed, waxaan hadaba idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dilkii Sheekh C/qaadir.
Qaabka dilku u dhacay
Sheeakh C/qaadir oo Muxaarado jeedinay
ALLAHA u naxariistee Sheekh C/qaadir Nuur Faarax wuxuu ku sugnaa gudaha Masjidka Badar ee magaalada Garoowe kaasi oo ku dhaw Gurigii uu ka deganaa magaalada Garoowe, iyadoo xiliga dilku dhacayey ay aheyd xili salaada Casar lagu jirey, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in salaada uu ka baxay Sheekhu.
Laakiin xog waran kala duwan oo aynu raadinay waxaa la sheegay in Sheekhu uu ku jiray ragcadii ugu dambeysay ee Salaada Casir, isagoo Sujuud ku jiray, waxaa jira warar sheegaya in Sheekhu uu uu salaada ka baxay oo uu tukunayey Sunno.
Ninka dilka geystey wuxuu Sheekha ka soo toogtey daaqad ka mid ah daaqadaha Masjidka, waxaase warkan daciifinaya Sheekha oo dhiigusu yaal masjidka gudihiisa, iyadoo taasi muujinayso in Sheekha qofka dilay uu gudaha u soo galey Masjidka.
Qaabka ninka la hayo loo qabtey:
Ninka loo hayo dilka Sheekh C/qaadir Nuur Faarax
Dhiigii ka baxay Sheekha oo ka dhex muuqda Masjidka gaar ahaan goobtii lagu diley
Masjidka Badar ee Sheekha lagu diley
Dad xog ogaal ah oo SBC la hadashay ayaa sheegay in ninka loo hayo dilka Sheekh C/qaadir Nuur Faarax uu markii ugu horeysay eryoodey wiil uu dhaley Marxuum Sheekh C/qaadir wiilka oo ninka ka daba ordaya ayaa ku qaylinayey “War ninka ii qabta Aabahay ayuu diley” iyo hadalo kale waxaana taasi keentey in ninkii ay baacsadaan dad aad u fara badan oo dhalinyaro u badnaa.
Ninka ayaa la sheegay in uu ku hubaysnaa laba baastooladood isagoo dadkii raacdeysanayey isku dayey in uu xabad isaga reebo laakiin dadka ayaanay cabsi galin ninkaasi hubka uu watey iyo xabadaha uu ridayey, waxaana xabadaasi ku dhaawacmey laba qof oo mid tahay dumar.
Mudo yar ka dib ninkaasi la baacsanayey ayaa gacanta lagu soo dhigay, iyadoo feer, haraati iyo dhagaxaan ay la dhaceen dadkii careysnaa ee baacsanyey, hase yeeshee waxaa ka soo gaarey dad kale oo ninka ka badbaadiyey dhalinyaradii cayrsanayesay waxanaa isla markiiba goobta soo gaaray ciidamada amaanka oo lagu wareejiyey ninkaasi oo wajigiisa ay ka muuqato daqaro ka dhashay wayxaabihii dadku ku halgaadayeen.
Dad hor leh oo loo qabtey dilka Marxuum Sheekh C/qaadir
SBC ayaa ogaatey in ilaa iyo hada gacanta ciidamada amaanka ay ku jiraan sadex qof oo mid ka mid ah ay tahay haweenay magaceeda uu sheegay ninka dilkaasi in uu geystey ay u qabteen dadweyne ka agdhawaa Masjidka Sheekha lagu diley, iyadoo ninka loo hayo in dilkaasi uu gacantiisa ku fuliyey lagu magacaabo C/raxmaan Xuseen Jaamac Bille, waxaanse wali la shaacin magacyada dadka kale ee la qabtey, inkastoo laamaha amaanka iyo Madaxweyne Faroole ay xaqiijiyeen in dad kala duwan loo qabtey ku luglahaanshaha dilka Marxuum Sheekh C/qaadir.
Sheekha Xiliga la aasayo (duugayo)
Beri Insha ALAAH waxaa lagu wadaa in Meydka Sheekh C/qaadir lagu aaso qabuuraha ku yaal duleedka magaalada Garoowe, iyadoo qaban qaabada aaska Marxuumka ay ilaa galabta ka socotey magaalada Garoowe, iyadoo la filayo in dad aad u fara badan oo ka kala yimid Garoowe iyo gobolada kale ee dalka ay ka soo qayb galaan aaska Marxuum Sheekh C/qaadir.
Aaska Sheekh C/qaadir wuxuu dhici doonaa hadii ALLE idmo marka la tukudao xiliga salaada duhur waqtiga Geeska Afrika sida ay shaaciyeen qaban qaabiyeyaasha aaska Marxuumka.
Jawiga Garoowe oo kacsan iyo Dareen culus oo uu dhaliyey dilkan
Jawiga guud ee magaalada Garoowe ayaa galabta markii laga warhelay dilka Sheekh C/qaadir cirka isku shareeray, iyadoo inta badan goobihii ganacsiga la xiray, dadkuna ay isugu urureen Isbitaalka magaalada oo la dhigay meydka Sheekha, waxaana si guud looga dareemay dilka Sheekh magaalada Garoowe iyadoo dadku ay si weyn uga naxeen dilka Sheekha oo ka mid ahaa culima’udiinka waa weyn ee Soomaaliyeed.
Sh.C/qaadir & Culima’udiin kale oo ku sugan Masjidka Rawda ee Bosaso xili ay socotey Nadwo Diini ah.
Guud ahaan deegaanada Puntland, qaybaha kale ee dalka iyo waliba wadamada ay ku nool yihiin Soomaalida warka ugu weyn ee la hadal hayo wuxuu ahaa dilka marxuum Sheekh C/qaadir, iyadoo si weyn looga argagaxay dilka Marxuumka oo waliba ka dhacay gudaha Masjid (Guriga ALLE), arintaasi oo si weyn looga qaracmay.
Wariyeyaasha SBC Garoowe & xarumaha kale